Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Oganda mankany Dubai: vantany vao tafavoaka amin'ny lisitra mena COVID izy ireo
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao farany UAE • Vaovao Mafana Oganda • Vaovao isan-karazany
Oganda mankany Dubai: Vonona ny hiainga
Oganda Airlines dia eo am-panombohana sidina lavitra ho any Dubai natokana ho an'ny Oktobra 2021, arahin'i London sy Guangzhou hatramin'ny nahazoan'ny Airbus taratasy fanamarinana ofisialy (AOC) ofisialin'ny Uganda Civil Aviation Authority (UCAA) omaly 23 aogositra 2021 .
Ity fivoarana ity dia mamarana ny fizotry ny fanamarinana maharitra 5-dingana izay nahitana ny fitambaran'ireo mpivarotra A330 tany Entebbe.
Ny zotram-piaramanidina izao dia afaka miova eo anelanelan'ny CRJ-900 sy ny A330 avo lenta amin'ny serivisy, miankina amin'ny fangatahan'ny mpandeha sy ny entana.
A330 dia hampiasaina amin'ny serivisy ho any London, Dubai, Mumbai, ary Guangzhou raha vantany vao tafavoaka ny lisitra mena COVID-19 i Oganda.
Ny Tale Jeneraly misolo tena ny UCAA, Fred Bamwesigye, dia nitehaka ny ekipa tamin'ny fahombiazan'ny dingana fampidirana ny Airbus amin'ny Mitsubishi CRJ 900 ao amin'ny AOC nandritra ny lanonam-panolorana natao tany Entebbe.
Ny dingana farany amin'ny fizotran'ny fanamarinana dingana 5 dia nanaraka sidina avy any Entebbe, Ogandà, ho any Johannesburg, Afrika Atsimo, rehefa tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Airbus # A330-800 Neo ny kapiteny fampiofanana zokiny Francis Barros sy ny kapitenin'ny fiofanana ambony Pete Thomase ny 12 aogositra 2021, tao amin'ny seranam-piaramanidina OR Tambo International.
Ny fampandrosoana dia namarana ny fizotry ny fanamarinana maharitra 5 dingana izay nahitana ny fitambaran'ireo mpanamory fiaramanidina A330 tany Entebbe, niandry ny AOC hatramin'ny nahavitan'ny kaompaniam-pitondrana ny baikon'ny mpitatitra nasionaly ny faharoa an'ny A2 tamin'ny volana febroary avy amin'ny mpanamboatra Airbus miandry ny AOC.
Manome ny zotram-pivoahana izao ny fahafaha-mifindra eo anelanelan'ny CRJ-900 sy ny A330 avo lenta amin'ny serivisy, miankina amin'ny fangatahan'ny mpandeha sy ny entana.
Raha ny filazan'ny tale jeneraly Uganda Airlines Acting, Jennifer Bamuturaki, ny A330 dia hampiasaina amin'ny serivisy ho any London, Dubai, Mumbai, ary Guangzhou raha vantany vao tafavoaka ny lisitra mena COVID-19 i Oganda any amin'ny firenena itodiana. Ny fameperana mitohy amin'ny dia avy any Oganda dia nahita ny serivisy nomanina ho any Dubai nilona iray volana ka hatramin'ny Oktobra, raha izany kosa dia nesorina tany London tamin'ny fiandohan'ny 2022.
Londres, Mumbai, ary Guangzhou dia iray amin'ireo zotra farany ambony tsy voatanisa avy any Entebbe raha ny antontan'isa nanomboka tamin'ny taona 2019. Ny zotra Entebbe-London dia nisy mpandeha mpandeha 84,000 nandritra ny taona, narahin'i Mumbai tamin'ny 42,000 ary Guangzhou tamin'ny 29,000. Izany dia maneho enta-mavesatra isan'andro amin'ny mpandeha 230 eo anelanelan'ny Entebbe sy London - 115 mankany Mumbai ary 79 mankany Guangzhou.
Any Oganda, nanomboka ny 3 Janoary 2020, ka hatramin'ny 24 aogositra 2021, dia nahatratra 118,673 19 ny tranga voamarina fa COVID-2,960 nisy fahafatesan'ny 23, hoy ny tatitra nataon'ny World Health Organization (WHO). Tamin'ny 2021 Aogositra XNUMX, total Dosis vaksinina 1,163,451 XNUMX XNUMX no natolotra.
Logan Levi hoy:
Oktobra 31, 2021 ao amin'ny 06: 12
Raha efa tany amin'ny firenena na faritany iray ao amin'ny lisitra mena amin'ny firenena ianao na oviana na oviana. Satria nahita ny fihenan'ny otrikaretina ny firenena, ny 60-70% amin'ny mponina ao amin'ny firenena dia mety namolavola antibiôsy ho an'ny virus. Afaka mandeha any Frantsa ihany ianao raha manana toerana mahasosotra anao.